Zawgyi iOS7Jailbreak FAQ - Saturngod
Zawgyi iOS7Jailbreak FAQ
Posted on Updated January 2, 2014 January 1, 2014 by saturngod
အခု iOS7အတွက် evasi0n jailbreak နဲ့ jailbreak လုပ်လို့ရပါပြီ။
ဇော်ဂျီ Font ဘယ်လို သွင်းမလဲ
ဇော်ဂျီ font ကို Install လုပ်ရန် ၂ ဆင့် ပြုလုပ်ရပါမယ်။ ပထမဆုံး profile သွင်းပါ။ http://d.pr/f/M8Es+ သွင်းပါ။ သူ့ကို သွင်းရန် jailbreak လုပ်စရာမလိုပါ။ zawgyi profile အကြောင်း ကို ဒီမှာ ရေးထားဖူးပါတယ်။ ဒီ profile က safari နဲ့ webview တွေမှာ မမြင်ရပါဘူး။ မြင်ရအောင် jailbreak လုပ်မှ ရပါမယ်။
evasi0n နဲ့ jailbreak လုပ်ပြီး Cydia က Sources > Edit > Add မှာ http://cydia.macforus.com ကို ထည့်ပါ။
Mac For Us repo အောက်က Zawgyi iOS7Font ကို သွင်းပါ။
Font သွင်းထားတယ်။ mail နဲ့ note မှာ မြန်မာလို မမြင်ရဘူး
Zawgyi font profile မသွင်းထားလို့ပါ။
Font profile သွင်းထား Cocoa error code 516 တက်နေတယ်။
http://d.pr/f/dYDM+ ကို ပြောင်းသွင်းကြည့်ပါ။
Zawgyi iOS 4.3 ကို သွင်းထားတယ်။ Zawgyi iOS7font ထပ်သွင်းရမလား
Zawgyi iOS 4.3 နဲ့ အလုပ်လုပ်နေရင် Zawgyi iOS7ထပ်သွင်းစရာ မလိုပါဘူး။
Zawgyi Keyboard ဘယ်လို သွင်းရမလဲ
လက်ရှိ ဇော်ဂျီ keyboard ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ သန့်သက်ရဲ့ keyboard နဲ့ မိုးစက် ရဲ့ keyboard ပါ။ မိုးစက် ရဲ့ keyboard ကို cydia.macforus.com repo က MMKeyboard For iOS 7+ ကို သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးလျှင် iOS ရဲ့ Setting ကိုသွားပါ။ General > Keyboard > Keyboards > Add New Keyboard > Czech keyboard ကို ထည့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
TTKeyboard ကို Cydia ရဲ့ Source မှာ http://ttkz.me/apt ထည့်ပြီးတော့ သွင်းနိုင်ပါတယ်။
« NSMag android app available for Android 4.1 or later Nothing »
Kyawthu Latt says:
ZawGyi iOS7font ကို install လုပ်ချင်လို့ အရင်အဟောင်း zawgyi font ios ကိုremove လုပ်လိုက်တာ cydia ဝင်လို့ မရတော့ဘူးပြန်ပြန်ထွက်သွားတယ်
Zawgyi font iOS mean , Zawgyi iOS 4.3 font ? It’saproblem for remove in iOS7🙁 sorry, if you can’t try to restart or restore the iOS .
Zawgyi font ios7ကို iPhone5နဲ့ 4s မှာသွင်းလိုက်ရင် facebook မှာအရမ်းလေးနေတယ်ဗျ ကျေးဇူးပြုပြီး စစ်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Did you install Zawgyi iOS 4.3 before ?
ဂျေးဘရတ်လုပ်ပီး ဇော်ဂျီသွင်းထားပေမဲ့ note မှာ မြန်မာလို မပေါ်ပါ. Profile ကနေထက်သွင်းလိုက်မှ ပေါ်လာပါတယ်.
Yes, I already mention in this post
Can u compileakeyboard for me??
I don’t haveasource code and I am not developer of mm keyboard. So, I can’t.
Can you Please add the Old Font and Keyboard for IOS3in the Macforus’s Cydia Repo? Some old iDevice no longer supported by Apple. And the latest firmware of them is IOS 3.1.3. I’m using Custom Firmware by Whited00r (IOS 3.1.3). Thanks.
I have install both Zawgyi for iOS7and font profile. Mail,note, and Facebook works but Safari and Chrome and some RSS apps are not displaying the zawgyi font. Any solution for this? Thanks.
http://blog.saturngod.net/nothing/zawgyi-ios-7-faq , you can use zawgyi force bookmarklet in safari
Ye Linn says:
File not found. There is code 516 error at my jail broken iPad mini 7.0.4. Please help
jailbreak လုပ်ထားတုန်းက zawgyi font သွင်းထားဖူးရင် အဲဒီ ပြဿနာ ရှိပါတယ်။ Restore လုပ်မှပဲ ရမယ် ထင်တယ်။